सावधान ! शरिरका यी ४ अंग भुलेर पनि नछुनुहोस् ! नत्र आइपर्छ जटिल समस्या – MediaNP
काठमाडौँ । शरिरका संवेदनशिल मानिएका अंगहरु नाक, कान, आँखा जस्ता अंगहरुको विशेष तरिकाले स्याहार गर्नुपर्छ । यी अंगलाई पटक पटक छुने गर्दा विभिन्न किसिमको संक्रमणहरु शरिरको अन्य अंगमा सर्ने भएकाले यसको बारेमा सजग रहन जरुरी रहेको छ । यद्यपी केही यस्ता व्यक्ति हुन्छन् शरिरको अंगहरु पटक पटक छोइरहने । यदि तपाईमा पनि यस्तो बानी छ भने तुरुन्तै बानीलाई परिपवर्तन गर्नुहोस् जुसले संक्रमणबाट बचाउँछ ।
१.आँखा : शरिरको सबैभन्दा संवेदनशिल अंग आँखा हो । आँखालाई पटक पटक मिच्ने बानीले आँखामा इन्फेक्सन हुने भएकाले यस्तो बानीलाई तुरुन्तै हटाउनुपर्छ ।
२.ओठ : ओठलाई पटक पटक छुने बानी गर्दा ओठको रंग नै हराउँछ भने ओठमा सुख्खापन बढ्दै जान्छ । ओठलाई पटक पटक छुने गर्दा हाम्रो हातमा रहेका किटाणुहरु मुखबाट पेटसम्मा पुग्ने भएकाले पेटसम्बन्धी समस्याहरु देखिने हुन्छ ।
३.अंडर आर्म्स : शरिरमा सबैभन्दा धेरै पसिना आउने अंग अंडर आम्र्स पटक पटक छुनु हुँदैन् । पसिना धेरै आउने भएकाले ब्याक्टेरियाहरु हातको सहायताले शरिरको अन्य अंगमा पुग्ने भएकाले विभिन्न रोगाहरुको संक्रमण बढ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसकारण यस्तो बानी छ भने पनि आजै बाट छोड्न जरुरी रहेको छ ।
४.अनुहार : अन्य अंग भन्दा अनुहारको छाला निकै संवेदनशिल भएको कारण पटक पटक अनुहारमा हात लगाउने गर्नु हुँदैन् । त्यसकारण अनुहारलाई छुँदा सफा हातले मात्रै छुनु पर्छ ।